Kasaa yk gabatee qaaqa kana keessattis dawwaachuun nidanda'ama.
Akaakuu kasaa yk gabatee isa filatte irratti hundaa'uun, caancalootii kanaan gadii nibahu.
Caancala kana Akaakuu Kasaa isa saaguu barbaadduu, ifteessuu fi qindeessuudhaaf itti fayyadami.
dhangeessa kan matadureewwan kasaa, gargareessotaa fi glfatoota kasaa jijjiiruuf akaataalee keewwataa adda addaa ramadu dandeessa. Akkasumas, akaataalee keewwataa qaaqa kana keessatti fooyyessuu nidandeessa.
Lakkoofsa tarjaawwanii akkasuumas mudana tarjaa akkaataa fuulaa, goodayyaa, yk kutaa tokkootiif ifteessa.
teessuma tarjaa kan kasaa yk gabatee qabeentaa ifteessuuf caancala kana fayyadami. Durtiin, matadureen kasichaa hamma tarjaa tokkoo kan bal'atuuf mudana fuulaa bitaa irra ka'uun kan bal'atudha.
Qabeentaaf Kasaawwan fayyadamuun